January 2012 | အ င်္လ ကာ ည
မှားယွင်းတတ်သည့် သဒ္ဒါနှင့် ဝေါဟာရအသုံးအနှုန်းများ (...
Talk English with your friends
Presentation နဲ့ပတ်သက်သော key word များ
လူတစ်ယောက်ရဲ့ ရင့်ကျက်နိုင်တဲ့နှုန်းကို တွက်ကြည့်ရင်
ကျွန်တော်တို့ နေ့စဉ် လေးပင်ထိုင်းမှိုင်းတဲ့ အလုပ်တွေ၊စာပေတွေချည်းပဲ
ဖတ်နေရလို့ကြာတော့ ကျွန်တော်တို့ တတွေ တက်တက်ကြွကြွ ဖြစ်မနေတော့ဘူးဆိုရင်............
ရသ စာပေတွေက ကျွန်တော်တို့ကို စိတ်ခွန်အားပေးပါလိမ့်မယ်။
လူတစ်ယောက်၏ ဘ၀မှာ ရှိရှိသမျှ အရာအားလုံးကို စိုးရိမ်ပူပန်နေမည်ဆိုပါက
ထိုသူရဲ့ဘ၀ဟာ အတော် ငြီးငွေ့စရာ ကောင်းပေလိမ့်မယ်………
နှစ်တွေတစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ် ကုန်လို့ကုန်ဆုံးသွားမှန်း သတိထား မထား မိလောက်အောင်
သောကတွေသိပ်များနေရင် လူဖြစ်ရကျိုးနပ်တယ်လို ဆိုနိုင်ပါ့မလား…
မှားယွင်းတတ်သည့် သဒ္ဒါနှင့် ဝေါဟာရအသုံးအနှုန်းများ ( Affect and Effect, Stationary and Stationery)
9:49 AM | Labels: လေ့လာစရာ အင်္ဂလိပ်စာ
Affect နဲ့ Effect သည် အမှားများသော ဆင်တူယိုးမှာစကားလုံးတွေဖြစ်ကြပါတယ်။
Affect သည် Verb (Action) ဖြစ်ပြီး ၊ တစ်ခုခုလုပ်ရန်ရှိသောအခါ Affect ကို သုံးရပါမယ်။
Affect - တစ်စုံတစ်ခု (သို့) တစ်ဦးတစ်ယောက်ကို သြဇာသက်ရောက်၍ ပြောင်းလဲမှုလုပ်သည်။
The noise outside affected my performance.
Effect သည် Noun (thing) ဖြစ်ပြီး၊ လုပ်ကိုင်ပြီးစိးသွားသောအရာအများအတွက် Effect ကို သုံးရပါမယ်။
Effect သည် ရှေ့တွင် Article (an , the) လိုက်ပြီး နောက်တွင် Preposition (on) ပါသည်။
နောက်ထပ်သုံး၍ရသည့်အသုံးအနှုန်းမှာ နောက်ဆက်တွဲ သက်ရောက်မှုရလဒ်ဖြစ်သည်။
Stationary သည် မလှုပ်မလှက်ငြိမ်သက်နေခြင်းကို ဆိုလိုပါသည်။
3:32 AM | Labels: လေ့လာစရာ အင်္ဂလိပ်စာ
ကျနော် Myanmar Network Gathering Party မှာ Presentation တစ်ခုပြောတုန်းက ကိုယ့်ကိုကိုယ့် ဘာတွေလိုအပ်ချက်ရှိလဲဆိုတာ သတိမထားမိဘူး။ လေ့လာမိမှ လိုအပ်ချက်တွေကိုတွေ့လာတယ်။ ကျနော့်လို မဖြစ်ရအောင် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအနေနဲ့ Presentation တစ်ခုပြုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင် လိုအပ်ချက်များကို လေ့လာနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်၍ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Presentationတစ်ခုအဆင့်ဆင့်ပြုလုပ်သွားရာမှာ ပြောတဲ့ သူဘက်ကရော၊ နားထောင်သူဘက်ကိုပါ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်နေဖို့လိုပါတယ်။ ကိုယ်ပြောမယ့် စိတ်ကူးအကြံဥာဏ်တွေကို စနစ်တကျ စုစည်း တင်ဆက်သွားနိုင်အောင် နမူနာပုံစံတစ်ခုကို လေ့လာကြည့်ပါ………
Essential Language of PresentationsPresenter က စီစဉ်တကျ ဟောပြောတင်ဆက်သွားနိုင်ရင် ပရိတ်သတ်အတွက် အထောက်အကူဖြစ်သွား နိုင်ပါတယ်။ Presentation ကို အဆင့်ဆင့် တင်ဆက်နေစဉ်အတွင်းမှာ ပြောဆို သုံးစွဲရမယ့် စကားတွေကို လေ့လာနိုင်ရန် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်.
The Introduction (နိဒါန်းပိုင်း)
Greeting the audience (ပရိတ်သတ်ကို နှုတ်ဆက်ခြင်း)
Good (Morning / Afternoon / Evening)
မင်္ဂလာ (မနက်ခင်းပါ / နေ့လည်ခင်း/ ညနေခင်း)
(ဂုဏ်သရေရှိ လူကြီးမင်းများ ခင်ဗျာ/ရှင် မင်္ဂလာညနေခင်းပါ။
I was very happy to be invited to speak to you today.
(ကျနော်ဒီနေ့ စကားပြောဖို့ ဖိတ်ကြားတဲ့ အတွက် အလွန်ဝမ်းမြောက်ပါတယ်)
(အခုလို ရောက်လာရတာ အလွန်ဝမ်းမြောက်စရာပါ)
I’m very pleased to be with you.
(ခင်ဗျားတို့နဲ့ တွေ့ခွင့်ရတာ ကျနော်အလွန်သဘောကျပါတယ်)
(ဒီနေ ကျနော်ဒီကို ရောက်လာရတာ ၀မ်းမြောက်စရာပါ)
7:19 AM | Labels: ရင်ကိုဖွင့်တဲ့ " သော့ "
*မျက်နှာမူရာ ဘယ်ဖက်ကိုပဲ လှည့်လှည့်
ချစ်သူရဲ့ ကိုယ်သင်းနံ့ကို မရတာ ကြာပြီ……..။
ချစ်သူ နှုတ်ဆက်သွားတဲ့ အဲဒီညက
ကျွန်တော် မျက်ဝန်းမှာ စံပယ်တွေ တလက်လက်ထလို့။
အရိပ်လို မခွဲမခွာ ထာဝရအတူနေလိုသူကိုမှ
ကတိ၊ သစ္စာ၊ မှာတမ်းစကားတွေ အထပ်ထပ်ခြွေရင်း
တစ်ခြမ်းမြင့် အပြုံးနဲ့ ရေရွတ်တက်လာခဲ့သော
*လုပ်ငန်းခွင်ရဲ့ တာဝန်နဲ့ ၀တ္တရားကို
ကိုယ့် ရင်ထဲကို မြင်အောင်လှမ်းမကြည့်ဖြစ်ဘူး။
ကျွန်တော်နဲ့ ချစ်သူ ………
ပိုနေမြဲ၊ ကျားနေမြဲ အဖြစ်မှာ ဝေးနေဆဲ၊ လွမ်းနေဆဲ……
ကျွန်တော်နဲ့ ချစ်သူ ……….. နှစ်ယောက်သားလေ
…. ပိုနေဝေး၊ ကြာနေဝေး…..။ ။
5:27 PM | Labels: လေ့လာစရာ အင်္ဂလိပ်စာ
8:54 PM | Labels: လေ့လာစရာ အင်္ဂလိပ်စာ
အင်္ဂလိပ်စကား လွယ်ကူစွာနဲ့ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ပြောဆိုချင်လျှင် မိမိနဲ့အတူပြောဆိုလေ့ကျင့်ဖို့လူမရှိပဲ ဖြစ်နိုင်မယ်မထင်ဘူး။
"speak" နဲ့ "talk" စကားလုံးရဲ့ ကွဲပြားခြားနားတဲ့ ဆက်နွယ်ချက်ကလေးကိုကြည့်ပါဦး။။
speak = "words come out of your mouth", ကျနော်တို့ပါးစပ်ကထွက်လာတဲ့စကားလုံး ဆိုတော့ (စကားပြောသည့်ပေါ့)
talk = the idea of speaking with others.(စကားလက်ဆုံပြောဆိုခြင်း-တစ်ဦးထက်ပိုတာကိုပြောတာပါ)
8:10 AM | Labels: လေ့လာစရာ အင်္ဂလိပ်စာ
(Word Form) ပုံစံကို ဥပမာအနေ ဖြင့် “ Love ” စကားလုံးပုံသဏ္ဍာန်များ ကိုလေ့လာနိုင်စေရန် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်……။
Read more: စကားလုံးတည်ဆောက်မှု - Myanmar Network http://www.myanmar-network.net/forum/topics/3423487:Topic:526745#ixzz1isqdeGnD
7:45 PM | Labels: လေ့လာစရာ အင်္ဂလိပ်စာ
Presentation ဆိုတဲ့စကားကို ဒီဘက်ခေတ်မှာ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်သုံးလာကြပါတယ်. အဓိပ္ပါယ်က သီးခြားဘာသာရပ်တစ်ခုထဲက အကြောင်းအရာတစ်မျိုးမျိုးကို ကိုယ်ကပြင်ဆင်လာပြိး တင်ပြဟောပြောတာ မျိုးကို ခေါ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ Presentation ဆိုတာ အကြောင်းအရာမျိုးစုံ ရှိနိုင်သလို၊ ပြောမယ်ဆိုတာနဲ့ စနစ်တကျပြင်ဆင်ပြီး ဟောပြောရတာရှိသလို၊ အခြေအနေအရလိုအပ်လာလို့တင်ပြပြောဆိုရတာမျိုးလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။ အချိန်ယူပြီး ပြောရတာမျိုးရှိသလို ၊ တိုတိုတုတ်တုတ်နဲ့ပြောရတာလည်းရှိကြပါတယ်။ မိမိနဲ့ ရင်းနှင်းပြီးသားသူတွေကိုပြောရတာ၊ မိမိနဲ့သူစိမ်းပြင်ပြင်ဖြစ်နေတဲ့သူတွေကိုပြောရတာလည်း ရှိကြပါတယ်။ မိမိပြောတဲ့ဘာသာရပ်ကို လုံးဝမသိသေးတဲ့သူတွေကြားထဲမှာ ပြောရတာမျိုးရှိသလို၊ မိမိဟောပြောမယ့် အကြောင်းကို ကျွမ်းကျင်နားလည်ပြီးသားအုပ်စုရှေ့မှောက်မှာလည်း ပြောရတာမျိုးလည်းကြုံနိုင်ပါတယ်။
Presentation ပြုလုပ်တာဟာ လူတွေကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတာ၊ ဘာသာရပ်တစ်ခုမှာ စိတ်ဝင်စားလာ အောင် နှိုးဆော်ပေးတာ၊ တုံပြန်ဆွေးနွေးတာ၊ ငြင်းခုံတာတွေဖြစ်လာအောင် လှုံ့ဆော်ပေးတာ၊ ထောက်ခံမှု ရလာအောင်လုပ်တာ (ဒါမှမဟုတ်) မိမိပြောချင်တဲ့သတင်း အချက်အလက်တွေ သိသွားအောင် မျှဝေပေးတာ စသဖြင့် ရည်ရွယ်ချက် အမျိုးမျိုးဖြင့် ပြုလုပ်ကြပါတယ်.
ဘယ်လို Presentation ကိုပဲလုပ်လုပ် မိမိတင်ပြပြောဆိုတာ တစ်ဖက်က ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်နားလည် သွားရအောင် မိမိဆီမှာ ကျွမ်းကျင်မှုတွေရှိနေဖို့လိုပါတယ်.၊
အဲ့ဒီအတွက် Presentation နဲ့ပတ်သက်ပြီး အဓိကကျတဲ့ စကားလုံးတွေကို လေ့လာဖို့ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်
( လူစုလူဝေးကြားတွင် ဟောပြောတာ ၊ သီဆိုကပြဖျော်ဖြေတာကို နားထောင်သူ၊ ကြည့်ရှုသူ ပရိတ်သတ် များကို ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲတာဖြစ်ပါတယ်)
ဒီကနေ့ ပရိတ်သတ်အနေနဲ့ လူဘယ်လောက်များများရှိမယ်လို့ ကျနော်တို့မျှော်လင့်ထားသလဲ၊??
(သက်မွေးကျောင်းတူတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ၊ သီးခြားလုပ်ငန်းထဲက ကိုယ်စားလှယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေ၊ ရက်ပေါင်းများစွာ စုဝေးပြီး အစည်းအဝေးတွေ၊ Presentation တွေ ဆက်တိုက်ပြုလုပ်ကြတာကို ကွန်ဖရင့်(သို့) ညီလာခံလို့ ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲကြပါတယ်)
(တစ်ခုခုကိုညှိနှိုင်းကြ၊ ဆွေးနွေးကြ ဆုံးဖြတ်ချက်ချကြဖို့ လူတွေဆုံးဆည်းကြတဲ့အခမ်းအနားကို အစည်းအဝေး၊ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲ လို့ ခေါ်ဆိုသုံးစွဲကြပါတယ်)
အပတ်စဉ်ဆွေးနွေးနေကျ စီမံချက်အစည်းအဝေးကို ဖျက်သိမ်းလိုက်တယ်
(ပရိတ်သတ်ရှေ့မှာ မိမိက ပြင်ဆင်လာပြီး ဟောပြောတင်ပြတာ ဖြစ်ပါတယ်)
ဘုတ်အဖွဲ့ အစည်းအဝေးမှာ ဟောပြောဖို့ သူ(မ) ဖိတ်ခေါ်ခံခဲ့ရတယ်။
ဟောပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲက တစ်ယောက်ဟာ ကုမ္ပဏီဥပဒေ ကို ကျွမ်းကျင်တယ်။
(များသေားအားဖြင့် နိုင်ငံရေးသမားတွေ ပုံမှန်လိုလိုဟောပြောကြတာမျိုးကို ခေါ်ဆိုပါတယ်၊ မြန်မာမှာ တော့ မိန့်ခွန်း လို့ပဲ မှတ်သားနိုင်ပါတယ်)
Presentation ကို တစ်နည်းအားဖြင့် Take လို့လည်းသုံးနိုင်ပါတယ်)
ဟောပြောတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်က စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းအောင် ဟောပြောနိုင်တာကို ကျနော်ဖြင့်ကျေးဇူးတင်တယ်)
Welcome to Myanmar Network
ဒီ Myanmar Network မှာ အသင်းမဝင်ရသေးသောသူများကိုလည်း အသင်းဝင်ထားဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ အသင်းဝင်ထားခြင်းဖြင့် အခြားအသင်းဝင်များနှင့် ဆက်သွယ်နိုင်ခြင်း၊ ဤ website ပေါ်တွင် အလုပ်ခေါ်စာများအပါအဝင် အကြောင်းအရာအသစ်များတင်တိုင်း alert message ရရှိခြင်း၊ forum တွင်ပါဝင်ဆွေးနွေးနိုင်ခြင်း၊ လစဉ်အသင်းဝင်များကို ကံစမ်းမဲ ဖောက်ပေးသည့်အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ခွင့်ရခြင်း စသည့်အကျိုးကျေးဇူးများခံစားရမည် ဖြစ်ပါသည်။ အသင်းဝင်လိုပါက ဤနေရာတွင် အသင်းဝင်နိုင်ပါသည်။
Read more: Myanmar Network http://www.myanmar-network.net/#ixzz1ijzjBi1u